बार्ह चेलाहरू – Word of Truth, Nepal
हामीले बाह्र प्रेरितहरूको अध्ययन गर्‍यौं। हामीले मत्थियास, याकूब र पावलको पनि अध्ययन गर्‍यौं। यी मानसिहरू के कति कारण विशेष थिए? यी मानिसहरू के कति कारण अरूभन्दा फरक थिए? यी मानिसहरू के कति कारण सफल भए?
तपाईं नि? के तपाईं पनि हामीले अध्ययन गरेका यी मानिसहरू जस्तै बन्नु सम्भव छ? के तपाईं प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला बन्नु सम्भव छ? आज पनि प्रभु येशूले पुरुष, महिला, युवा, युवती, बाल, बालिकालाई “मेरो पछि लाग” (हेर्नुहोस्, लूका ५:२७) भन्दै बोलाउनुहुन्छ। के त्यसो गर्नलाई तपाईंले निर्णय गर्नुभयो? ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको के हो?
हामीले यी पाठहरूमा अध्ययन गरेका मनिसहरू तपाईं जस्तै साधारण मानिसहरू थिए। तिनीहरूसित विशेष र असाधारण शक्ति थिएन। तिनीहरू उच्च घराना वा धनाढ्य परिवारहरूमा जन्मेका थिएनन्। तिनीहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू थिएनन्। तिनीहरू सामान्य मानिसहरू थिए। तरैपनि यी मानिसहरू परमेश्वरको दृष्टिमा साथै मानिसहरूको दृष्टिमा महान् व्यक्तिहरू बने।
यी मानिसहरूको महानताको एउटा उदाहरणलाई हेरौं। लूका ३:१ मा हामीलाई एकजना रोमी सम्राटको नाम बताइएको छ; येशू प्रभु यस संसारमा हिँडडुल गर्नुहुँदा यिनै सम्राट संसारमाथि शासन गर्दथे। उनको नाम थियो _____________ सिजर (लूका ३:१)। यी मानिसले रोमी साम्राज्यमाथि २० वर्षभन्दा बढी राज्य गरे। त्यस बेला उनी सम्भवतः संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति थिए।
तिबेरियासको बारेमा तपाईंलाई कत्तिको थाह छ? उनले के कस्ता काम गरे र के कस्ता कुरा बोले, के तपाईंलाई थाहा छ? तपाईंलाई उनको जीवनको बारेमा कुनै कुरा थाहा छ त? उनको मृत्युको बारेमा? पत्रुस र पावलको बारेमा चाहिँ तपाईंलाई कत्तिको थाहा छ? तपाईंलाई महान् तिबेरियासको बारेमा भन्दा पत्रुस र पावलकै बारेमा बढी थाहा छ। कतिपय अख्रीष्टियनहरूलाई समेत पत्रुस र पावलको बारेमा केही न केही कुराहरू थाहा हुन्छ तर तिबेरियासको बारेमा उनीहरूलाई एउटै कुरा थाहा हुँदैन। के तपाईं पत्रुस वा पावल वा यूहन्ना वा याकूब नाउँ राखिएका व्यक्तिहरूलाई चिन्नुहुन्छ? तिबेरियास नाम गरेको चाहिँ कतिजना चिन्नुहुन्छ?
यी चेलाहरूको महानता एक विशेष किसिमको महानता थियो। उनीहरू सामान्य र साधारण मानिस थिए, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई महान् बनाउनुभयो। उनीहरूको रहस्य के थियो? कुन कुराले यी मानिसहरूलाई त्यस्तो विशेष र फरक बनायो?
प्रेरित ४:१३ पढ्नुहोस्। पत्रुस र यूहन्ना उनीहरूका शत्रुका सामु थिए। सुसमाचार प्रचार गरेका हुनाले उनीहरू पक्राउ परेका थिए (पद २-३)। उनीहरूलाई पक्रने यहूदी धर्मगुरूहरू पत्रुस र यूहन्ना “अनपढ र ____________ मानिसहरू” (प्रेरित ४:१३) हुन् भनी जान्दथे। यसको मतलब पत्रुस र यूहन्ना सामान्य, साधारण मानिसहरू थिए। उनीहरूले त्यसबेलाका नामुद प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा शिक्षा हासिल गरेका थिएनन्, तर उनीहरूका शत्रुहरू समेतले पत्रुस र यूहन्नासित एउटा अति विशेष गुण भएको महसुस गरेका थिए। “उनीहरूचाहिँ _________का साथमा रहेका छन् भनी तिनीहरूले उनीहरूलाई चिने” (प्रेरित ४:१३)! यदि दुईजना सामान्य मान्छे (पत्रुस र यूहन्ना) लाई लिएर येशूसित साथमा राखेको खण्डमा तिनीहरू दुईजना ज्यादै असामान्य व्यक्तिहरू बन्न पुग्दा रहेछन्!
के तपाईंलाई थाहा छ, प्रभु येशूले तपाईंको जीवनमा पनि यस्तै भिन्नता ल्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईं एउटा विशेष व्यक्ति नहुनु होला। तपाईसित ठूलो क्षमता नहोला स्कूलमा तपाईं प्रथम श्रेणीको विद्यार्थी नहुनु होला। तपाईं एक साधारण (ORDINARY) व्यक्ति हुनु होला, तर तपाईंको जीवनमा ठूलो भिन्नता ल्याउन चाहनुहुने एकजना ज्यादै विशेष र असाधारण (EXTRAORDINARY) मुक्तिदाता हुनुहुन्छ।
के तपाईंले प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिँदैहुनुहुन्छ? परमेश्वरले कुनै व्यक्तिद्वारा एउटा ठूलो काम गर्न चाहनुहुँदा उहाँले उसको क्षमता (ABILITY) खोज्नुहुन्न। क्षमता परमेश्वरसित हुने कुरा हो, मान्छेसित होइन। परमेश्वरलाई केवल तपाईंको समर्पणता (AVAILABILITY) चाहिएको छ। परमेश्वर प्रयोगयोग्य (USABLE) व्यक्ति खोज्दैहुनुहुन्छ। परमेश्वर, तपाईं उहाँको निम्ति प्राप्य (ACCESSIBLE) भएको चाहनुहुन्छ; तपाईंलाई पाउन र तपाईको जीवनमा र हृदयमा उहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ।
डाक्टरले शल्यक्रिया गर्दाखेरि लाउने रबरको पञ्जालाई विचार गरौं। के त्यस्तो पञ्जासित शल्यक्रिया गर्ने क्षमता हुन्छ? ______। यदि त्यस्तो पञ्जा डाक्टरलाई उपलब्ध र प्राप्य छ भने के डाक्टरले त्यसलाई प्रयोग गरेर शल्यक्रिया गर्न सक्नेछ? ___________। के डाक्टरले मैलो पञ्जा प्रयोग गर्न चाहने छ? ____________। के प्रभुले आफ्ना चेलाहरू सफा रहेको चाहनुहुन्छ ताकि तिनीहरू उहाँको हातमा प्रयोगयोग्य होऊन् (यूहन्ना १३:८)? _______________।
जब परमेश्वरले मान्छे खोज्नुहुन्छ, उहाँले धनी वा शक्तिशाली वा विशेष वा शिक्षित व्यक्ति खोज्नुहुन्न। परमेश्वरलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने कुरा ती कुराहरू होइनन्। जब परमेश्वरले मान्छे खोज्नुहुन्छ, उहाँले प्राप्य (AVAILABLE) व्यक्तिहरू खोज्नुहुन्छ। प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई रोज्नुहुँदा उहाँले दुईचारजना मछुवाहरू रोज्नुभयो, एकजना महसूल उठाउनेलाई रोज्नुभयो र एकजना क्रान्तिकारीलाई रोज्नुभयो! यी मानिसहरू केवल साधारण मानिस थिए, साधारण मानिसहरू जसले आफूहरूलाई एक ज्यादै असाधारण मुक्तिदाताका निम्ति प्राप्य बनाए!
१ कोरिन्थी १:२६ पढ्नुहोस्। परमेश्वरले धेरैजना ____________ वा धेरैजना ___________ वा धेरैजना ____________ बोलाउनुहुन्न। उहाँले ज्यादै साधारण मानिसहरूलाई नै बोलाउनुहुन्छ: “तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नाका निम्ति संसारका ________ कुराहरू [पत्रुस, यूहन्ना र मत्ती जस्ताहरू] लाई ____________ छ; अनि _____________ कुराहरूलाई शर्ममा पार्नाका निम्ति परमेश्वरले संसारका _____________ कुराहरूलाई चुन्नुभएको छ (१ कोरिन्थी १:२७)। मान्छेको बुद्धि र शक्तिले हुने होइन। परमेश्वरले मूर्ख र कमजोरहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई ज्यादै बुद्धिमान् र शक्तिशाली बनाउन सक्नुहुन्छ!तब, यसको श्रेय र महिमा कसलाई जान्छ (१ कोरिन्थी १:२८-३१)? ___________
चेला हुनलाई चुकाउनुपर्ने मूल्य
कुनै वस्तु महत्त्वको छ भने त्यसलाई पाउन केही खर्च लाग्छ। थोरै खर्च लाग्ने वस्तु प्रायः थोरै महत्त्वकै हुन्छ। एउटा औंठी किन्नलाई तपाईं बजारको फुटपाथमा जान सक्नुहुन्छ वा तपाईं गहना पसलमा जान सक्नुहुन्छ। कुनचाहिँ औंठीको मूल्य बढी हुन्छ? सके, तपाईं कुनचाहिँ औंठी किन्नुहुन्छ? कुनचाहिँ औंठीको बढी पैसा पर्छ?
“दाम अनुसारको माल हुन्छ” भन्ने भनाइ प्रायः साँचो हो। तपाईंले एउटा साइकल रू ५०० मा किन्नुभयो भने त्यो साइकल त्यति राम्रो खाले हुँदैन होला। पक्कै पनि त्यो नयाँ त हुँदैन नै! प्रभु येशूको चेला बन्नु भनेको खर्चिलो कुरा हो र यसको मूल्य ज्यादै ठूलो छ। र यसका लागि तिर्नु पर्ने मूल्य तिर्नु सार्थक छ।
यस अध्ययनमालामा हामीले अध्ययन गरेका ती १२ चेलाहरूलाई विचार गरौं। उनीहरू प्रत्येकले मूल्य तिरे। उनीहरूले आ-आफ्ना परिवारलाई छाडे, आफ्ना पेशालाई छाडे, आफ्ना सम्पत्तिलाई छाडे र उनीहरूले ख्रीष्टलाई पछ्याए। उनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नै ज्यानसमेत गुमाएर सहीदको मूल्य तिरे। जसरी पत्रुसले एकपटक भनेका थिए, “हेर्नुहोस्, हामीले __________ कुरा त्यागेका छौं र तपाईंको ________ ____________ छौं” (मर्कूस १०:२८)।
ख्रीष्टलाई पछ्याउन यी सबै कुराहरू त्याग्नु सार्थक थियो त? पत्रुस लगायत अन्य चेलाहरूले मूल्य तिरे, तर अन्तमा उनीहरू गुमाउनेहरू बने कि प्राप्त गर्नेहरू बने (मत्ती १०:३९ पढ्नुहोस्)? याद गर्नुहोस् कुनै पनि मूल्यवान् थोक पाउन खर्च लाग्छ। जसले केही हाल्दैन, उसले प्रायः केही पाउँदैन। जसले धैरै हाल्छ उसले प्रायः धेरै पाउँछ।
मर्कूस १०:२९-३० मा प्रभु येशूका वचनलाई राम्ररी बुझौं। के प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उनीहरूले केही पाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभयो? ____________। उनीहरूले यही वर्तमान जीवनमा के पाउनेछन्? उनीहरूले भविष्यको आउनेवाला जीवनमा के पाउनेछन्?
आज विश्वासी भएर जिउने बारेमा विचार गर्नुहोस्। के आज विश्वासयोग्य विश्वासी भएर जिउनलाई कुनै मूल्य चुकाउनुपर्छ? के त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू छन् जसलाई विश्वासीले “छाड्नुपर्छ” वा परित्याग गर्नुपर्छ? त्यस्तो परित्याग चाहिँ पाउने कुराको तुलनामा सार्थक छ त? एक विश्वासीले यस जीवनमा पाउने कुराहरू के के हुन्? यस जीवनमा विश्वासी हुनु किन सार्थक छ? यस जीवनमा विश्वासीसँग के हुन्छ जुनचाहिँ अविश्वासीसँग हुँदैन? आउनेवाला जीवनमा विश्वासी हुन किन सार्थक छ? आउनेवाला जीवनमा विश्वासीहरूसँग के हुनेछ जुनचाहिँ अविश्वासीहरूसँग हुनेछैन?
हामीले अध्ययन गरेका चेलाहरू धनवान् मानिसहरू थिएनन्। तिनीहरू सम्पत्तिलाई अँगालेर बस्नेहरू थिएनन्। प्रभुलाई पछ्याउनका लागि तीमध्ये कतिजनाले आफ्नो मछुवा पेशालाई छाडे। पछि गएर पत्रुससित कर तिर्नलाई पैसा पनि थिएन (मत्ती १७:२४-२७)। आफ्नो जीवन धान्न पावलले तम्बु बनाउने काम गर्थे (प्रेरित १८:३)। प्रेरित ३:६ अनुसार पत्रुससित धेरै पैसा थियो कि थिएन? ___________
ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरूको बयान लेख्दा पावलले एकपटक एउटा अचम्मको कुरा लेखे: “_______ ___________ जस्ता, तर धेरैलाई ________ बनाउँछौं” (२ कोरिन्थी ६:१०)। यी मानिसहरू गरीब थिए, तर उनीहरूले धेरैलाई धनी बनाउन सक्थे। यो कसरी हुन सक्छ? एकजना गरीब मान्छेले कसरी अरूहरूलाई धनी बनाउन सक्छ? यी चेलाहरूसित के थियो अरूहरूलाई उनीहरूले बाँड्न सक्ने के थियो जुनचाहिँ पैसाले किन्न सक्ने कुनै पनि कुरा भन्दा ज्यादै मूल्यवान् थियो (रोमी ६:२३)? _______________________ __________________________________
२ कोरिन्थी ६:१० मा हामीले सिक्न सक्ने दोस्रो कुरालाई हेरौं। यहाँ चेलाहरूलाई यसरी बयान गरिएको छ: “_______ ________ जस्ता, तरै पनि हामीसँग _______ _______ छन्।” यो कसरी हुन सक्छ? केही नभएर पनि कसरी ऊसँग सब थोक हुन सक्छ? हात खालि भएर पनि त्यो कसरी भरिभराउ हुन सक्छ? यसको जवाफ सरल छ। भौतिक सम्पत्तिको सवालमा चेलाहरू धनी थिएनन्, तर उनीहरूलाई खाँचो पर्ने सबै कुरा उनीहरूसँग थियो।परमेश्वरले उनीहरूका हरेक खाँचोलाई पूरा गरिदिनुभयो (मत्ती ६:२८-३३ मा पढ्नुहोस्), तर आत्मिक सम्पत्तिको सवालमा उनीहरू आत्मिक खरबपतिहरू थिए! उनीहरूसँग “_______ आत्मिक आशिषहरू थिए” (एफेसी १:३)। विश्वासीहरूसँग भएका त्यस्ता कुराहरूमध्ये के के हुन् जुनचाहिँ मुक्ति नपाएकाहरूसँग हुँदैन र जसलाई पैसाले किन्नै सकिन्न? (यीमध्ये केही कुराहरूलाई एफेसी १ अध्यायमा सूचित गरिएको छ)।
मान्छे मरेपछि उसले आफूसित कति पैसा लैजान सक्छ? कति थान जिन्सी? कतिओटा घर वा कति कित्ता जमीन वा कतिओटा गाइवस्तु वा कतिओटा मोटरगाडी? जब एकजना विश्वासीको मृत्यु हुन्छ, के उसको अर्को जीवनमा उसँगै रहिरहने त्यस्ता कुनै सम्पत्तिहरू हुनेछन्? के पार्थिव सम्पत्ति (जुनचाहिँ यस जीवनभरका लागि मात्र हुन्छन्) र अनन्तका सम्पत्ति (जुनचाहिँ सदाका लागि रहनेछन्) का बीच त्यहाँ ठूलो भिन्नता छ?
एक साँचो चेलाले आफूसँग भएका सबै थोक र आफ्ना सारा सम्पत्तिलाई परित्याग गर्नुपर्छ, त्यसलाई बिदा दिनुपर्छ (लूका १४:३३)। बिदा दिनुपर्छ भन्नाले उसले आफ्नो सबै सम्पत्तिहरूलाई बाँडिदिनुपर्छ भनेको होइन, आफ्ना सबै पैसा र लुगा अरूलाई दिनुपर्छ भनेको होइन। तर यसको माने यो हो, विश्वासीले यसरी भन्न सक्नुपर्छ, “मेरो आफ्नो भन्ने कुनै सम्पत्ति छैन। मसँग भएका सबै नै प्रभु येशू ख्रीष्टकै हुन्। म आफू स्वयम् उहाँकै हुँ र मसँग जे जति छ, उहाँकै हो (१ कोरिन्थी ६:१९-२०); यसकारण, म आफूसँग भएका मेरा सम्पत्ति र पैसालाई म ज्यादै होशियारीपूर्वक प्रयोग गर्न चाहन्छु किनकि मसँग भएका सबै थोक बास्तवमा उहाँकै हुन्!” के तपाईं यो भन्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईंको सम्पत्तिमाथि उहाँको अधिकार छैन भने यसको पछाडि कारण के हुन सक्छ भने तपाईं स्वयम् उहाँको नभएको हुन सक्छ!
प्रभुलाई पहिलो स्थान दिइनुपर्छ
पत्रुस वा यूहन्ना वा पावलकहाँ आएर कसैले यसरी सोधे मानौं, “तपाईंको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को हुनुहुन्छ?” यी मानिसहरूले कस्तो जवाफ दिनेथिए होला? के उनीहरूले जवाफमा “मेरी पत्नी!” भन्ने थिए कि वा “मेरो भाई!” वा “मेरा बाबु”! वा “मेरी आमा!” वा “मेरो मित्र!” भन्ने थिए कि? अहँ, यीमध्ये प्रत्येकले नै एकै खालको जवाफ दिनेथिए: मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
मत्ती १०:३७ लाई राम्ररी पढ्नुहोस्। के आफ्नो बाबु वा आमालाई प्रेम गर्नु गलत हो भनेर प्रभुले सिकाउनुभएको हो? _______। उहाँलाई भन्दा ________ कसैलाई प्रेम गर्नु गलत हो भनेर उहाँले सिकाउनुभएको चाहिँ हो! उहाँ नै पहिलो हुनुपर्छ! हाम्रो पहिलो र सबभन्दा गहिरो भक्ति उहाँले नै पाउनुपर्छ। भी आइ पी भन्ने कुरा सुन्नुभएको होला। भी आई पी भनेको ज्यादै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति (अङ्ग्रजीमा भेरी इम्पोर्टन्ट पर्सन)। प्रभु येशू भी आइ पी मात्र हुनुहुन्न। उहाँ यो भन्दा ज्यादै बढी हुनुहुन्छ। उहाँलाई एम आइ पी भनिनुपर्छ— सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति (अङ्ग्रेजीमा मोस्ट इम्पोर्टन्ट पर्सन)। के उहाँ तपाईंको लागि मोस्ट इम्पोर्टन्ट पर्सन हुनुहुन्छ?
यदि प्रभुले हाम्रो हृदयमा पहिलो स्थान पाउनुभएको छ भने, हामीले अरूहरूलाई ठीक तरिकाले प्रेम र वास्ता गर्न सक्नेछौं। प्रभुले नै हामीलाई हाम्रा प्रियहरूप्रति जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो छोरा, वा छोरी, दाजु-भाइ वा दिदी-बहिनी, साथी हुनलाई मद्दत गर्नुहुनेछ।
यूहन्ना १५:१८-२० अनुसार, प्रभुले चेलाहरूलाई उनीहरूले संसारबाट कस्तो किसिमको व्यवहारको अपेक्षा गर्न सक्छन् भनेर सिकाउनुभयो?___________________________________________ _____________________________________________________
ख्रीष्ट येशूको चेला हुनु भनेको शैतानिक संसारको बीचमा परमेश्वरकै मान्छे हुनु हो। प्रभुलाई साँच्चीकै पछ्याउने र उहाँको सेवा गर्ने मान्छेलाई ख्रीष्टलाई विश्वास नगरी बस्ने संसारले मन पराउँदैन। यस अध्ययनमालामा हामीले अध्ययन गरेका चेलाहरूको विचार गर्नुहोस्। ती सबै नै सताइए, अनि धेरैजना त उनीहरूको विश्वासको खातिर सहीद बनाइए (मारिए)। उनीहरू संसारमा लोकप्रिय थिएनन्। बरू ख्रीष्टले भन्नुभए जस्तै उनीहरू घृणित भए, सताइए।
संसारले सकली विश्वासीहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराको बयान गर्दा पावलले १ कोरिन्थी ४:१३ मा यसरी लेखे, “हामी यस संसारका ___________ र सबै कुराका फोहोर-मैलासरह भएका छौं।” उनको तात्पर्य यो थियो, “संसारले हामीलाई सबभन्दा खराब खाले मान्छेहरू ठान्छन्। तिनीहरूले हामीलाई मानव जातिकै कसर वा फोहोर-मैला ठान्छन्। मान्छेले फोहोर-मैलालाई फ्याँक्न चाहन्छन् किनकि त्यो फोहोर हुन्छ, कुनै कामको हुँदैन; संसारले पनि हामीलाई त्यसरी नै हेर्छ!”
यी वीर, साहसी चेलाहरू संसारबाट घृणित थिए तर ख्रीष्टका निम्ति प्रिय थिए।तपाईं नि? तपाईंलाई कुन कुरा ठूलो लाग्छ — तपाईंलाई संसारले कस्तो ठान्छ भन्ने कुरा कि प्रभुले तपाईंलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा? तपाईं शैतानको सांसारिक प्रणालीको व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ कि ख्रीष्टको महिमित राज्यको भागीदार हुन चाहनुहुन्छ? तपाईं संसारको प्रशंसा चाहनुहुन्छ कि प्रभुको प्रशंसा चाहनुहुन्छ? तपाईं आशिषको सीधा मार्गमा मुक्तिदातालाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ कि दुःख र विनाशमा पुर्‍याउने टेढा मार्गमा संसारलाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ? रोजाइ तपाईंकै हातमा छ।
प्रभु येशूको अनुसार साँचो चेला हुनलाई एक व्यक्ति उहाँको _________मा लागिरहनुपर्छ (यूहन्ना ८:३१)। “चेला” को माने हो “शिष्य, विद्यार्थी”। के तपाईं ख्रीष्टको शिष्य हुनुहुन्छ? के उहाँ तपाईंको शिक्षक हुनुहुन्छ? के बाइबल तपाईंको पाठ्य पुस्तक हो? के तपाईं आफ्नो बाइबल आफूसित बोकेर मण्डली सभामा जाने गर्नुहुन्छ? किन गर्नुहुन्छ? वा किन गर्नुहुन्न? हप्ताभरिमा के तपाईं आफ्नो बाइबल खोल्नुहुन्छ? कहिले? किन? पुस्तकहरूको पनि यो पुस्तक तपाईंको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण लाग्छ? गत हप्तामा प्रभुले तपाईंलाई कुनै कुरा सिकाउनुभएको थियो?
येशूले एक पटक यसरी भन्नुभयो, “हे प्रभु, हे प्रभु’ भन्दछौ, र मैले भनेका कुराहरूचाहिँ पालन __________” (लूका ६:४६)। प्रभुलाई म पछ्याउँदैछु भन्ने तर प्रभुको आज्ञा नमान्ने व्यक्तिले केवल आफैंलाई धोका दिँदैछ। चेलाले प्रभुलाई आफ्नो प्रेम कसरी देखाउन सक्दछ (यूहन्ना १४:१५,२१,२३)? _____________ ______________________________________________
म विश्वास गर्दछु भन्नु वा म चेला हुँ भन्नु एउटा कुरा हो। तर आज्ञा पालन गर्दै आफ्नो विश्वासलाई देखाउनु भनेको बेग्लै कुरा हो। विश्वास क्रियाशील छ (सक्रिय छ) भने त्यसलाई आज्ञा पालनमा देख्न सकिन्छ। के तपाईं आज्ञा पालन गर्दै त्यसको आशिषमा रमाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईंले घरमा प्रभुको आज्ञा पालन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? स्कूलमा? मण्डलीमा? छरछिमेकमा?
कोही ख्रीष्टको पछि लाग्न चाहन्छ र उहाँलाई पछ्याउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई ___________ गर्नुपर्छ (लूका ९:२३)। यसको तात्पर्य उसले आफैलाई “हुँदैन” भन्नुपर्छ, र उसले ख्रीष्टलाई “हुन्छ” भन्नुपर्छ। उसले “मैले चाहेको अनुसार होइन तर केवल मेरो मुक्तिदाताले चाहनुभएको अनुसार!” भन्नुपर्छ। पलास्टिकबाट निस्कनै नमान्ने, हात छिराउनै नदिने पञ्जालाई डाक्टरले प्रयोग गर्न सक्दैन। “डाक्टर, मलाई भर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं जे चाहनुहुन्छ म त्यही गर्नेछु” भन्ने पञ्जालाई मात्र डाक्टरले प्रयोग गर्न सक्छन्।
कहिल्यै मान्छे नचढेको जङ्गली घोडाले आफ्नै इच्छा मात्र गर्न खोज्छ। त्यसलाई काबुमा ल्याई, तालिम दिइनुपर्छ र मात्र त्यो मालिकको नियन्त्रणमा चल्न सक्छ। जङ्गली घोडा प्रयोगयोग्य हुँदैन; उसको मालिकसित मिलेर काम गर्ने उसको आदत छैन। त्यसलाई काबुमा ल्याइनैपर्छ, आफ्नो मालिकको इच्छामा सुम्पिने बनाइनुपर्छ र तब उसले आफ्नो मालिकसित मिलेर काम गर्न सक्ने आनन्द उसलाई हुन्छ। तब त्यस्तो सम्बन्धमा मिल्ने सबै किसिमका सुविधाहरू उक्त घोडाले पाउनेछ (दैनिक देखरेख, खाना, छाना आदि)। त्यस्तै गरी हामीले आफूलाई हाम्रा मालिक प्रभु येशू ख्रीष्टकहाँ सुम्पनुपर्छ र उहाँका लागि प्रयोगयोग्य हुनुपर्छ। विश्वासीको इच्छा तोडिनुपर्छ र उसले “म ता होइन, तर ख्रीष्ट” भन्न सक्नुपर्छ (गलाती २:२०)। यस्तो खाले सम्बन्ध प्रभुसित हुने क्रममा विश्वासीले परमेश्वरको प्रेम र वास्ताबाट हुने सबै आशिष र उपलब्धीहरूमा रमाउन सक्नेछ।
यस अध्ययनमालामा हामीले अध्ययन गरेका प्रत्येक व्यक्तिमा एउटा कुरा साझा भएको पाउँछौं। उनीहरू हरेकसित राम्रो खबरको एउटा सन्देश थियो र उनीहरू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्दै जहाँतहीँ गएका थिए।
के तपाईंसित अरूहरूसित बाँड्नलाई राम्रो खबरको सन्देश छ? त्यो सन्देश के हो? किन त्यो खबर राम्रो छ? के तपाईंले चिन्नुभएका व्यक्तिहरूलाई त्यो सन्देश सुनाइन खाँचो छ? किन? के परमेश्वरले तपाईं जस्तो एउटा साधारण र सामान्य व्यक्तिलाई यो राम्रो खबर अरूहरूलाई बाँड्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले तपाईंलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
एकजनाले यसरी भनेका छन्, “म खास कोही पनि होइन, तर म जोकोहीलाई एकजनाको बारेमा बताउँछु जसले जोकोहीलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ!
प्रभुका शुरूका चेलाहरूले यस शुभ-सन्देशलाई प्रेम गर्थे, र कुनै कुराले पनि उनीहरूलाई त्यसलाई प्रचार गर्न र अरूहरूसित बाँड्न देखि रोक्न सक्दैनथ्यो। उनीहरूमध्ये धेरैजना त्यस सुसमाचारप्रतिको उनीहरूको प्रेमको खातिर मारिए।
संसारसित खासै कुनै पनि शुभ-खबर छैन। पत्र-पत्रिकाहरूमा नराम्रा खबर थुप्रै हुन्छन्, राम्रा खबर थोरै हुन्छन्। परमेश्वरसँग संसारको लागि ज्यादै राम्रो खबर छ (यूहन्ना ३:१६)। के तपाईले यो शुभ-खबरलाई विश्वास गर्नुभयो? के तपाईं पनि यो खबर घोषणा गर्दै गरेकाहरूलाई साथ दिनुहुनेछ? याद गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईंको क्षमता खोजिरहनुभएको छैन। उहाँ के खोज्दैहुनुहुन्छ?
“बाह्र चेलाहरू” को अध्ययन यहीँ अन्त हुन्छ
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 19:32:162020-04-28 14:39:42तपाईं नि?
हुन त हामीलाई थाहा छ, यूसुफचाहिँ प्रभु येशूका बाबु थिएनन्। प्रभु येशू मरियम नाम गरेकी कन्याबाट जन्मनुभएको थियो अनि उहाँ जन्मनका लागि यूसुफको कुनै भूमिका थिएन (मत्ती १:१८-२३)। येशूको जन्म अलौकिक थियो; त्यो एउटा आश्चर्यकर्म थियो। परमेश्वरले कन्या मरियमको गर्भमा एउटा ज्यादै विशेष काम गर्नुभयो जुन कुराको बारेमा हामी लूका १:३५ मा पढ्छौं: “पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ, र परमप्रधानको ___________ले तिमीमाथि छाया पार्नेछ; यसैकारण तिमीबाट जन्मनुहुने __________ जनचाहिँ ‘_____________का ________’ कहलाइनुहुनेछ।” यो नै देहधारण भनिने आश्चर्यकर्म थियो।परमेश्वर देह बन्नुभयो र मानिसहरूका बीचमा बास गर्नुभयो (यूहन्ना १:१४ र १ तिमोथी ३:१६), र ईश्वर-मानव हुनुभएका प्रभु एउटा मानव परिवारको सदस्य बन्नुभयो।
प्रभु येशू मरियमले जन्माएका एउटै मात्र छोरा हुनुहुन्नथ्यो। उहाँ मरियमका “_______ छोरा” हुनुहुन्थ्यो (मत्ती १:२५)। पछि मरियमले अरू छोराहरू र छोरीहरू पनि जन्माइन्। येशूको जन्म भएपछि मरियम र यूसुफ पति र पत्नीको रूपमा सँगै बसे अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई धेरै सन्तानहरूको आशिष दिनुभयो (मत्ती १:२५ सित तुलना गर्नुहोस्)।
यूसुफ र मरियमको परिवार ठूलै परिवार थियो जसमा प्रभु येशू बाहेक चारजना छोराहरू र कम्तीमा दुइटी छोरीहरू थिए। के तपाईंको परिवार यत्तिकै ठूलो छ? संसारको परिवारमा प्रभु येशूका चारजना भाइहरू र कम्तीमा दुइटी बहिनीहरू थिए। कहिलेकाहीँ हामी ती भाइबहिनीहरूलाई प्रभुका “भाइबहिनी पर्नेहरू” भनेर भन्छौं किनकि यूसुफ प्रभुका बाबु थिएनन् यद्यपि उनीहरू मरियमकै एउटै गर्भाशयबाट जन्मेका थिए।
येशूको अविराम र सशक्त क्रियाशिलताको खबर कसको कानमा पुग्यो? उहाँका ______________ को (मर्कूस ३:२१), अर्थात् उहाँका परिवारका सदस्यहरूको। उनीहरूलाई येशूको फिक्री लागेको थियो र उनीहरू “उहाँलाई __________ निस्के” (मर्कूस ३:२१)। उहाँलाई थकाइ मार्न र खानकुरा खान खाँचो परेको हुनुपर्छ भनी ठानेर उनीहरूले उहाँलाई ती कुराहरू दिलाउनलाई उहाँलाई त्यो घरबाट बाहिर निकाल्न चाहन्थे।
येशूलाई कस्तो व्यक्ति ठाने उनीहरूले? उनीहरूले भने, ‘उसको होश ठेगानमा छैन’ (मर्कूस ३:२१)। यो त आजको बोलीचालीमा यसरी भने बराबर हो: “उसको हावा खुस्केको छ! ऊ पागल भएको छ!” उनीहरूले न ता प्रभु येशूलाई बुझ्न सकेका थिए न ता उहाँको सेवाकार्यलाई नै। उहाँको आफ्नै परिवारले उहाँलाई बौलाहा ठाने!!
एउटा विश्वासीले प्रभुलाई जब आफ्नो तन-मनले पछ्याउँछ र उहाँको सेवा गर्छ, त्यतिबेला कतिले उसको निर्णय र बेहोरालाई बुझ्न सक्दैन। खाना खानु अगाडि किन उसले शिर झुकाउँछ, किन प्रार्थना गरी बस्छ, किन बाइबल पढी बस्छ, हप्तैपिच्छे किन चर्च धाउँछ, किन पर्चा बाँड्दै हिँड्छ आदि उनीहरूले बुझ्नै सक्दैनन्। “हैन, के भयो यसलाई? पागल भयो कि क्या हो?” ख्रीष्टका निम्ति _________ बनेका व्यक्तिहरूको उल्लेख प्रेरित पावलले १ कोरिन्थी ४:१० मा गरेका छन्। मानिसले बुझ्न नसक्लान् तर परमेश्वर बुझ्नुहुन्छ। उसले आफ्नो होश गुमायो भनी मानिसले ठान्ला तर परमेश्वरलाई थाहा छ उसले कुनै कुरा गुमाएको छैन बरु उसले साँच्चै एउटा उदेकको मुक्तिदाता र परमेश्वरलाई प्राप्त गरेको छ।
एउटा अर्को घटनामा पनि येशू मानिसहरूको बीचमा हुनुहुन्थ्यो। बाहिरपट्टि केही व्यक्तिहरू उभिरहेका थिए जोहरू उहाँसित कुरा गर्नलाई एकदमै चाहिरहेका थिए। को थिए तिनीहरू (मत्ती १२:४६-४७)? _______ ___________________। के भन्नुभयो त प्रभु येशूले? “मेरी आमा र भाइहरूलाई भित्र बोलाउनु र म उहाँहरूसित कुरा गर्छु” — के यसो भन्नुभयो येशूले? ___________। बरु उहाँले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, “मेरी ______ को हुन्? र मेरा _________ को हुन्?” (मत्ती १२:४८)। कसैको भाइ हुनु भनेको उसको ज्यादै नजिकको हुनु हो। येशूको प्रश्नको तात्पर्य यो थियो: “मसित नजिकको सम्बन्ध हुनेहरू को हुन्? मसित नजिक हुनेहरू को हुन्?” प्रभुले त्यसपछि यसको जवाफ आफै दिनुभयो। मरियम र आफ्ना चारजना भाइहरूलाई औँल्याएर देखाउनुको सट्टा उहाँले कसलाई औँल्याएर देखाउनुभयो (मत्ती १२:४९)? _____________। यसबारे उहाँले भन्नुभएको कुरालाई राम्ररी ध्यान दिनुहोस्:
मत्ती १२:५० – “किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा ________को ________ ________ गर्छ, उही मेरो ________, ___________, र ________ हुन्।”
लूका ८:२१ – “मेरी ________ र मेरा ____________ यिनीहरू हुन्, जसले ______________को ________ ______________ र त्यो ___________ गर्दछन्।”
येशूका भाइहरू, धेरै मानिसहरूले थाहा नपाऊन् भन्ने हेतुले उहाँले आफ्ना कार्यहरू “गुप्तमा” गर्नुभएको चाहन्थे।
येशूका भाइहरू अब भिन्नै मानिस भएका छन्; एक समयका अविश्वासीहरू अब विश्वासी भएका छन्। कुन कुराले यस्तो परिवर्तन ल्यायो त? खास के भएको थियो? यी मानिसहरूलाई के भएको थियो भन्ने बारेमा बाइबलमा एउटा सङ्केत पाइन्छ। प्रभुका भाइहरूमध्ये एकजनाको नाउँ याकूब थियो। याकूबको जीवनमा एक दिन यस्तो कुनचाहिँ घटना घट्यो जसले उसको जीवनलाई नै परिवर्तन गरिदियो (१ कोरिन्थी १५:४,५,७ पढ्नुहोस्)? __________________________ ________________________। उनले बौरिउठ्नुभएका प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखे। जुन कुराले “शङ्कालु थोमा” लाई “विश्वासी थोमा” बनाएको थियो, उही कुराले “अविश्वासी याकूब” लाई “विश्वासी याकूब” बनायो। यी भाइहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने कुरा ख्रीष्टको बौरिउठाइ थियो। यसपछिको अध्यायमा हामी अर्को व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं जसको जीवन पनि उसले बौरिउठ्नुभएका प्रभु येशूलाई देखेर आमूल परिवर्तन हुन गएको थियो! (ती को हुन्, अड्कल लगाउन सक्नुहुन्छ कि?)
याकूब सायद यूसुफ र मरियमबाट जन्मेका जेठा छोरा थिए (येशू बाहेक) किनकि दाजुभाइहरूको सूचीमा उनकै नाउँ पहिला उल्लेख छ (मत्ती १३:५५)। गलाती १:१९ मा उनलाई “_______का _______ याकूब” भनी उल्लेख गरिएको छ।
याकूब नाउँ भएका अन्य दुईजना व्यक्तिको अध्ययन हामीले गरिसक्यौं: _______का छोरा याकूब (मत्ती १०:२) र ___________का छोरा याकूब (मत्ती १०:३)। साथै अध्याय ३ र अध्याय ४ मा समेत हेर्नुहोला जहाँ “याकूब” नाउँ गरेका नयाँ नियमका विभिन्न व्यक्तिहरूको छलफल गरिएको छ। प्रभुको भाइ हुने याकूब चाहिँ बाह्र चेलामध्येका थिएनन्, तर प्रभुको बौरिउठाइ पश्चात् उनी शुरुको मण्डलीका ज्यादै महत्त्वपूर्ण अगुवा बन्न पुगे।
याकूब, यरूशलेम शहरमा भएको ठूलो मण्डलीका महत्त्वपूर्ण अगुवा बने जुन शहरमा नै मण्डलीको शुरुआत भएको थियो (प्रेरित २)। उनको बारेमा हामी प्रेरित १५:१३, २१:१८ र गलाती १:१९ र २:९ मा पढ्न सक्छौं। गलाती २:९ मा केफास (पत्रुस) र यू_________ सितै याकूबसमेतलाई “खाँ____” भनिएको छ। खाँबा एउटा भवनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भाग हो। खाँबाले भवनलाई थामिराख्ने काम गर्छ र खाँबाहरू नभएमा भवन ढलिजान्छ (जसरी शिमशोनको जीवनमा भएको घटनाले देखाउँछ)। यस तुलनाले पत्रुस, यूहन्ना र याकूब मण्डलीको प्रारम्भिक चरणमा कति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू थिए भन्ने कुरा देखाउँछ।
कसरी याकूब त्यति बलिया थिए त? मण्डलीमा कसरी उनी त्यति महत्त्वपूर्ण थिए? यस व्यक्ति कसरी त्यस्ता उत्कृष्ट अगुवा बने? उनी कस्तो चरित्रका मानिस थिए र कस्तो किसिमले जीवन जिउँथे भन्ने कुरामा नै यसको जवाफ हामी पाउँछौं। ऐतिहासिक परम्परा अनुसार याकूबलाई “धर्मी याकूब” (James the Just) भन्ने उपनाम दिइएको थियो भन्ने बुझिन्छ। याकूब यति पवित्र, धर्मी र भक्तिपूर्ण जीवन जिउँथे कि उसलाई यस्तो उपनाम दिइयो। साथै उनी प्रार्थना गर्ने मानिस थिए। प्रार्थनामा समय बिताएका हुनाले उनका घुँडाहरू उँटका जस्तै चाम्रा बनेका थिए भन्ने कथन छ, जसमा विशेष गरी उनले यहूदी जातिका लागि अन्तर्विन्ति गर्थे जसलाई उनी धेरै प्रेम गर्थे। यहूदी जातिका बीच याकूबको विशेष सेवाकार्य नै थियो (याकूब १:१ पढ्नुहोस्)।
हप्ताको हरेक दिन तपाईं कसरी आफ्नो जीवन बिताउनुहुन्छ भन्ने कुरा अरूहरूले साँच्चै जाने भने, तपाईंलाई कस्तो उपनाम दिइन्थ्यो होला? के तपाईं आफ्ना घुँडाहरूमा कुनै समय बिताउने गर्नुहुन्छ? के तपाईं बाइबल खोलेर कुनै समय बिताउनुहुन्छ कि चर्चघरमा जाँदा वा पारिवारीक सङ्गतिमा मात्र बाइबल खोल्ने गर्नुहुन्छ? के तपाईंलाई धर्मी ______________ (आफ्नै नाउँ लेख्नुहोस्) भन्ने उपनाम दिन मिल्छ होला? के तपाईंलाई एउटा “खाँबा” भन्न मिल्छ?
परमप्रभु परमेश्वरले येशूका दुईजना भाइहरूलाई आफ्नो पवित्र वचनका मानवीय लेखकको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। याकूबले ‘याकूबको पत्र’ लेखे। यहूदाले ‘यहूदाको पत्र’ लेखे। यहूदाचाहिँ मर्कूस ६:३ मा उल्लेख भएका यहूदा नै हुन्। यहूदाले आफूलाई “_______ _______को दास र __________को भाइ” (यहूदा १:१) भनेर आफ्नो परिचय दिएका छन्।
यी दुई व्यक्तिहरूले आफ्ना पत्रहरू लेख्दा शुरुमा कसरी लेखेका छन् भन्ने कुरा विचार गर्न लायक छ (याकूब १:१ र यहूदा १:१ पढ्नुहोस्)। उनीहरूले यसरी लेख्दैनन्, “म येशू ख्रीष्टको भाइ हुँ। म एउटै घरमा येशूसित हुर्केको हुँ। म उहाँसित एउटै छानामुनि बसोबास गरेको व्यक्ति हुँ। यस्तो विशेष मौका एकदम थोरैले मात्र पाएका छन्।” यी पदहरूमा के याकूब वा यहूदाले आफूहरू प्रभुको भाइहरू भएका बारेमा कुनै कुरा लेखेका छन्? ________। यी दुईजना नम्र व्यक्तिहरू थिए। यी दुईजनाले येशू ख्रीष्ट बास्तवमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी जानेका थिए: उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्थ्यो।दुवैले आफ्नो पत्रहरू लेख्दा यसरी शुरु गरेका छन्, “म येशू ख्रीष्टको दास (कमारो) हुँ!उनीहरूले “उहाँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ” भनेर भनेनन्, बरु उनीहरूले भने, “उहाँ मेरा प्रभु र मालिक हुनुहुन्छ, म उहाँको दास हुँ! मैले उहाँको इच्छा पालन गर्नुपर्छ, मैले उहाँको वचन पालन गर्नुपर्छ!” उनीहरूले मत्ती १२:५० र लूका ८:२१ को पाठ सिकेका थिए!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 19:25:322020-04-28 14:39:42याकूब र प्रभुका अन्य भाइहरू
“पत्रुस” नाउँ गरेको कुनै व्यक्ति तपाईं चिन्नुहुन्छ?_________। “यूहन्ना’ नाउँ गरेको कुनै व्यक्ति तपाईं चिन्नुहुन्छ?__________। “याकूब” नाउँ राखिएको कुनै व्यक्ति चिन्नुहुन्छ? __________। “शिमोन” नाउँ राखिएको कुनै व्यक्ति चिन्नुहुन्छ? __________।“यहूदा”नाउँ राखिएको कुनै व्यक्ति चिन्नुहुन्छ? __________। प्रायः बाबुआमाहरू आफ्ना छोराहरूलाई “यहूदा” नाउँ दिन चाहन्नन् किनकि उक्त नाउँले उनीहरूलाई यहूदा इस्करयोतीको र उसले गरेको ठूलो अपराधको सम्झना गराउँछ।
हुन त, “यहूदा” एउटा राम्रो नाउँ हो। उसका बाबुआमाले यहूदालाई एउटा अर्थपूर्ण नाम राखिदिएका थिए। पुरानो नियममा यहूदा याकूबका बाह्र छोराहरूमध्येका थिए (उत्पत्ति २९:३५)। “यहूदा” को अर्थ हो “उहाँ (परमेश्वर) को प्रशंसा होस्” (उत्पत्ति २९:३५ हेर्नुहोस्)। उसको ज्यादै राम्रो नाउँ थियो तर ऊ ज्यादै दुष्ट बन्न पुग्यो। यहूदाको जीवनलाई अध्ययन गर्ने क्रममा उसको कामचाहिँ नामजस्तो नभएको देख्नेछौं।
तपाईं नि? के तपाईंको नामसँग तपाईंको काम मिल्छ? के तपाईं “ख्रीष्टियन”नामले चिनिनुहुन्छ? के तपाईंको जीवन यस नाउँलाई सुहाउँदो छ? तपाईं एक ख्रीष्टियन हुनुहन्छ भनेर थाहा नपाउने व्यक्तिले तपाईंको बोली, व्यवहार देखेर के तपाईं एउटा ख्रीष्टियन हुनुपर्छ भनेर उसलाई लाग्नेछ होला? के तपाईंले आफूलाई “विश्वासी” भन्नुहुन्छ वा अरूहरूले तपाईंलाई विश्वासी भन्छन्? के तपाईंको जीवन यो नाउँलाई सुहाउँदो छ? के तपाईं एउटा विश्वासीको योग्य चालमा हिँड्ने, व्यवहार गर्ने गर्नुहुन्छ?
“इस्करयोती” चाहिँ खासै नाम होइन। यहूदा कहाँको मान्छे थियो भनेर जनाउन उक्त उपनाम प्रयोग गरिएको हो। यसले यहूदा करियोथको बासिन्दा थियो भन्ने जनाउँछ, जुनचाहिँ यहूदाको एउटा सानो गाउँ (यहोशू १५:२५) थियो। सम्भवतः बाह्र चेलामध्ये यहूदियाको एउटै मात्रा बासिन्दा यहूदा थियो। सम्भवतः अरू सबैजना गालीलका (मर्कूस १४:७०) थिए। बाइबलको पछाडिपट्टि नयाँ नियमको समयको प्यालेस्टाइनको नक्सा हेर्नुहोस्।
यहूदालाई “वि____________” (लूका ६:१६) को संज्ञा दिइएको छ। आफ्नो राष्ट्र, शासक, साथी वा मालिकलाई धोका दिने व्यक्तिलाई विश्वासघाती भनिन्छ। यहूदा ख्रीष्टको एक मित्र र चेलाको रूपमा चेलाहरूको समूहमा आवद्ध भएको थियो तर ऊ वास्तवमा शत्रु थियो। परमेश्वरको पक्षमा काम गर्नुको सट्टा उसले कसको पक्षमा काम गर्दै थियो (यूहन्ना १३:२,२७)? ____________ __________। यहूदाको बयान गरिएको पद यूहन्ना १३:१८ पढ्नुहोस्। यहूदाले ख्रीष्टसित साथीजस्तै भएर सँगै बसेर खाना खाएको थियो तर के ऊ सच्चा मित्र थियो? ऊ ख्रीष्टको पक्षमा थियो कि ख्रीष्टको विपक्षमा (यूहन्ना १३:१८)? ____________
आफू कसको पक्षमा जाने, हरेकले निर्णय गर्नुपर्छ! एकपटक येशूले भन्नुभयो, “जो म _______ छैन, त्यो मेरो ________ मा छ” (मत्ती १२:३०)। एउटा व्यक्ति कि त ख्रीष्टसँग हुन्छ कि त ख्रीष्टको विरोधमा हुन्छ। तपाईं उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ कि उहाँको विरोधमा? टतस्थ बस्न सकिन्न। पर्खालबीच बस्न सकिन्न। आधा शैतानको, आधा परमेश्वरको बन्न सकिन्न।
धोका दिनुको अर्थ हो, “हस्तान्तरण गर्नु, सुम्पिदिनु, पक्राइदिनु”। यहूदा एक धोकेबाज थियो जसले प्रभु येशूलाई उहाँलाई गिरफ्तार गर्न आएका एक ठूलो समूहको हातमा सुम्पिदियो (मत्ती २:४७-५६)। यहूदाले प्रभुलाई कसरी धोका दियो (मत्ती २६:४८,४९)?
यहूदा, गुलाफको बोटबाट निस्केको बिषालु सर्प जस्तै थियो। उसले मानिसको पुत्रलाई आफ्नो धोकापूर्ण चुम्बनले डस्ने काम गर्‍यो। उसले प्रभुलाई घृणापूर्ण हृदयबाट “प्रेम” को चुम्बनले चुम्बन गर्‍यो। त्यो सब हेर्न हामी त्यहाँ भएको भए हामीले यहूदालाई येशूको मित्र ठान्नेथियौं। उसका बाहिरी कार्यकलापहरू एउटा मित्रको जस्तो देखिन्थ्यो। मानिसहरू आफ्ना शत्रुहरूलाई प्राय: चुम्बन गर्दैनन्!
यहूदा अभिनय गर्न सिपालु थिए। उसको मुकुण्डो प्रभावकारी थियो। ऊ जालझेल गर्न सिपालु थियो। अरूले थाहा नपाओस् भन्ने हेतुले भित्री कुरा लुकाउन उसले जानेको थियो। उसले “वास्तविक यहूदा” लाई नदेखाउने प्रयास गर्‍यो। मुकुण्डो मुनिको वास्तविक यहूदालाई देख्‍न सक्ने त्यहाँ कोही थियो होला?
केही समय अगाडि ऊ साँझपख अरू चेलाहरू र येशूसँगै खानलाई बसेको थियो। येशूले भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीहरूमध्ये ____________ ले मलाई ___________” (मत्ती २६:२१)। यो कुरा येशूले यहूदाको बारेमा भन्नुभएको हुनुपर्छ भनेर अन्य चेलाहरूलाई लागेको थियो र? के उनीहरूले “यो त प्रभुले दुष्ट यहूदाकै बारेमा कुरा गर्नुभएको हुनुपर्छ” भनेर भने (मत्ती २६:२२)?____________। के यहूदा उनीहरूलाई झुक्क्याउन सफल भएका थिए? _______। के उनीहरूले मुकुण्डोमुनिको “वास्तविक यहूदा” लाई देख्‍न सकेका थिए? ___________
मत्ती २६:२१ मा येशूले भन्नुभएको कुराको पछाडि एउटा कारण थियो। उहाँले यहूदालाई आफ्नो मुकुण्डो फुकाल्न मौका दिँदैहुनुहुन्थ्यो। तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई धोका दिन लागिरहेका छौ। जसको कुरा म गर्दैछु उसलाई यो थाहा छ। यहूदा, तिमीले आफूलाई प्रकट गर!”
“प्रभु, त्यो मान्छे मै हुँ। तपाईंलाई धोका दिन षड्यन्त्र रच्ने र तपाईंलाई शत्रुको हातमा बेच्न खोज्ने व्यक्ति मै हुँ। म दोषी छु। प्रभु, म धोकेबाजमाथि दया गर्नुहोस्। मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, मेरो प्राण बचाउनुहोस् अनि म तपाईंको सेवा गर्न र तपाईंलाई साँच्ची नै प्रेम गर्न सकूँ।”
के यहूदाले गरेको र भनेको कुरा यही थियो त (मत्ती २६:२५)?____________। उसले आफ्नो मुकुण्डो फुकाल्न इन्कार गर्‍यो। उसले “वास्तविक यहूदा” लाई प्रकट गरेन। मत्ती २६:२५ मा यहूदाले भन्यो, “पक्कै पनि त्यो त म होइन नि, हो र गुरुज्यू?” येशूले “होइन, यहूदा तिमी होइन!” भन्ने जवाफ दिनुहुनेछ जस्तै गरी उसले ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै थियो। यहूदाको बोलीमा पूरा छलकपट थियो। त्यो व्यक्ति वास्तवमा म नै हुँ भनेर के यहूदालाई थाहा थियो (मत्ती २६:१४-१६)? ____________
येशूले आफ्ना बाह्र चेलाहरूलाई एकपटक भन्नुभयो, तिमीहरू शुद्ध छौ, तर सबै ता होइन” (यूहन्ना १३:१०) अशुद्ध चेला को थियो (यूहन्ना १३:११)?___________________________
येशूले “तिमीहरू सबै शुद्ध छैनौं” (यूहन्ना १३:१०) भन्नुहुँदा, यहूदाले आफ्नो मुकुण्डोलाई च्यातेर यसो भन्नुपर्थ्यो:
“प्रभु, त्यो मान्छे म नै हुँ! म अशुद्ध छु! मेरो हृदय तपाईंसित ठीक छैन, प्रभु। मलाई बचाउनुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् अनि म भित्रदेखि शुद्ध हुन पाऊँ! म देखावटी बनिरहन चाहन्न।”
सुसमाचारका पुस्तकहरूमा यहूदालाई सातपटक “___________ मध्ये एक” भनी उल्लेख (मत्ती २६:१४,४७; मर्कूस १४:१०,२०,४३; लूका २२:४७; यूहन्ना ६:७१) गरिएको छ। यसले हामीलाई सम्झना गराउँछ — उसले कति ठूलो अवसर पाएको थियो। ऊ येशूसँग विशेष किसिमले बस्न पाएका चेलाहरूको विशेष समूहमा पर्थ्यो। यहूदा र अरू चेलाहरू जत्तिकै येशूको नजिक अरू कोही हुन पाएनन्। उसले प्रभुसँगै यात्रामा हिँड्न पायो, उहाँसँगै बसेर खाना खान पायो, उहाँसित बसेर कुराकानी गर्न पायो, उहाँले प्रचार गरेको सुन्न पायो, अनि मुक्तिदाताकै मुखबाट मुक्तिको बाटोको बारेमा घरिघरि सुन्न पायो। उसले ख्रीष्टका सबै आश्चर्यकर्महरू देख्न पायो अनि सम्भवतः ऊ आफैले पनि आश्चर्यकर्महरू गर्योा (मत्ती १०:१,४,५-८ पढ्नुहोस्)। मान्छेलाई योभन्दा ठूलो अवसर के हुन सक्छ र? धन्य यो मानिस। तर येशूले त्यसो भन्नुभएन – मत्ती २६:२४। यहूदा धन्यको ठहरिएन, ऊ श्रापित ठहरियो!
यूहन्ना ६:७० मा यहूदाको बयान गर्नलाई येशूले निक्कै कडा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो “के मैले तिमीहरू ___________ लाई चुनिनँ र? तर तिमीहरू मध्ये _______ जना ________ हो।” उहाँका बाह्रजना चेलामध्ये एकजना चाहिँ शैतानपट्टि थियो। तिनीहरूमध्ये एकजना चाहिँ शैतानकै मान्छे थियो। एक दिन उसभित्र शैतान आफैं पस्नेवाला थियो जसको प्रेरणामा उसले आफ्नै मालिकलाई धोका दिई ठूलो अपराध गर्नेवाला थियो (यूहन्ना १३:२,२७)।
एक दिन मरियमले ज्यादै किम्मती सुगन्धित तेललाई प्रभु येशूको शिरमा खन्याइदिएकी थिइन् (यूहन्ना १२:१-३)। मरियमले प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रेम यसरी प्रकट गर्दा के यहूदालाई खुशी लागेको थियो (यूहन्ना १२:४-५)? ___________। आफू असल देखिनलाई यहूदाले कुनचाहिँ मुकुण्डो लगायो (यूहन्ना १२:४-५)?__________ ________________________________________। मुकुण्डो मुनि केको घीनलाग्दो फोहर थियो (यूहन्ना १२:६)? _______________________________। यहूदा चेलाहरूको “खजान्ची” थियो। पैसाको जिम्मा उसलाई सुम्पिएको हुनाले उसलाई चेलाहरूले विश्वासै गर्थे भन्ने बुझिन्छ। यहूदा विश्वासघाती मात्र नभएर ________ (यूहन्ना १२:६) पनि थियो।
यहूदाले प्रभु येशूलाई धोका दिनेबेलामा उहाँले सर्वप्रथम कुनचाहिँ शब्द उच्चारण गर्नुभयो (मत्ती २६:५०)?_________। हामी प्रभुको ठाउँमा भइदिएको भए हामीले रिसाउँदै यसरी कराउनेथियौं होला: “ए दुष्ट शत्रु! काम नलाग्ने धोकेबाज! अनन्तको लागि नरक जा।”
येशूले त्यस्तो केही भन्नुभएन। यहूदालाई आफ्नो नजिक आउन दिनुभयो, चुम्बन गर्न दिनुभयो,”र उसलाई “साथी”भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। यहूदाले परमेश्वरलाई कत्ति पनि प्रेम गर्दैनथ्यो तर परमेश्वरले यहूदालाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। प्रभुले आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, यहूदालाई समेत। उहाँले खराबीको बदला भलाई गर्नुभयो (रोमी १२:१९-२१)। यहूदालाई भने प्रभुको “साथी” भन्ने शब्दले जत्तिकै शायद अन्य कुनै कुराले त्यति साह्रो कायल पारेन होला।
तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको छैन भने किन पाउनुभएको छैन? यो त परमेश्वरले तपाईंलाई नचाहनुभएको कारणले हुन सक्दैन, तर तपाईंले नै परमेश्वरलाई नचाहनुभएको कारणले हुनुपर्छ (यूहन्ना ५:४०)। यहूदाले कहिल्यै यसरी भन्न पाउनेछैन, “येशूले मलाई कहिल्यै प्रेम गर्नुभएन, उहाँले मलाई कहिल्यै चाहनुभएन; मुक्ति पाउने, पापहरूको क्षमा पाउने मौका मैले कहिल्यै पाइनँ।” यहूदालाई सबैलाई जस्तै मौका थियो तर उसले सबै मौकाहरूलाई एक-एक गरी लत्यायो। त्यस कपटपूर्ण चुम्बनपश्चात् यहूदा सदाका लागि प्रभु येशूबाट अलग भए। परमेश्वरले दिनुभएको मौकाहरूलाई तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ?
मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा दयनीय यहूदालाई नै मान्नुपर्छ! येशूले एक पटक भन्नुभयो, “हाय त्यस मान्छेलाई……त्यो मान्छे ________________ भए त्यसका लागि असल हुनेथ्यो” (मत्ती २६:२४)! यूहन्ना १७:१२ मा यहूदालाई “___________ को ___________” भनी जनाइएको छ। बाइबलमा अर्को एउटै मात्र व्यक्तिलाई यस उपनामले जनाइएको छ। त्यो व्यक्ति को हो (२ थेस्सलोनिकी २:३-४)? ____________________। “विनाश” भन्ने शब्दलाई विचार गर्दा “नष्ट”भन्ने शब्दलाई सम्झनुपर्छ (यूहन्ना ३:१६ र १ कोरिन्थी १:१८ पढ्नुहोस्)। यसको माने यहूदा सधैंका लागि नष्ट हुनेछ। ऊ अनन्त-अनन्तसम्म पूरै नाश हुनेछ!यहूदालाई बयान गर्ने एउटै शब्द यही हो — विनाश!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 19:17:162020-04-28 14:39:42यहूदा इस्करयोती